ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် | Commerce
ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်
Tue, 07/05/2016 - 05:36 -- ictuser
၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူနိုင်ငံသား တိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြလျှောက်ထားရပါမည် -
( ခ ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား ( မူရင်း/မိတ္တူ )
(င) သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်(မူရင်း)
( စ ) သက်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်ကုန်သည်အသင်းဝင်ကဒ်ပြား ( မူရင်း )
( ဇ ) ကုမ္ပဏီထူထောင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ကတိဝန်ခံချက်
၄။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား အောက်ပါအတိုင်း စိစစ်ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးသွားပါမည် -
(က) မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းရှိ တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်မှ သေချာစွာ စစ်ဆေး လက်ခံပါမည်။
( ခ ) တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမှု မှတ်တမ်းစာအုပ်အား သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွင် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိရပါမည်။
( ဂ ) တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
(ဃ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားသူသည် တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ်ကို ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ထုတ်ယူရပါမည်။
( င ) တင်ပြလာသည့် အထောက်အထားများ မှန်ကန်မှုရှိပါက သတ်မှတ်ထားသော မှတ်ပုံတင် ကြေး ကျပ် (၅၀၀၀၀) အားနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းစေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတာဝန်ခံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပြုထုတ်ပေးပါမည်။
( စ ) ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးထားရှိမှုအခြေအနေအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းမှု အစည်း အဝေး သို့ တင်ပြအတည်ပြုပါမည်။
( ဂ ) မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ကျပ် ၅၀၀၀ိ/ သတ်မှတ်ပါမည်။
(ဃ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးကို (၁) နှစ်အတွက် ကျပ် ၅၀၀၀ိ/ သတ်မှတ် ပါမည်။
၆။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၁) လ ကြိုတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း အား သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်မှ လျှောက်ထားလျင် ကာလအလိုက် အောက်ပါဒဏ်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရပါမည် -
(က) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၁) လအတွင်း လျှောက်ထားလျင် ကျပ် ၅၀၀၀
( ခ ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၂) လအတွင်း လျှောက်ထားလျင် ကျပ် ၁၀၀၀၀
( ဂ ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားလျင် ကျပ် ၁၅၀၀၀
(ဃ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၃)လမှ(၆)လအတွင်း ကျပ် ၃၀၀၀၀
၇။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကိုသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ(၁)လ ကြိုတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း အား သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်မှ လျှောက်ထားလျင် နောက်ကျခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးများကို ပေးဆောင်နေရခြင်းကို ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃-၃-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စီမံခန့် ခွဲရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၅/၂၀၁၅)မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၈။ လုပ်ငန်းရှင်သည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်မဆောင်ရွက်လိုလျင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
၉။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည် အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည် -
(က) တည်ဆဲဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက်၍ ဥပဒေအရအရေးယူခံရခြင်း။
( ခ ) စီးပွားရေးမသမာမှုများ ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် Black List တင်သွင်းခံရခြင်း။
(ယခင် ITC မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(၆)လကျော်သည် အထိ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းမပြုပါက ၎င်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ ဖျက်သိမ်း ကြောင်း သတ်မှတ်ထားခြင်းအား ဖြေလျော့သည့်အနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန(EC) (၂၆/၂၀၁၅) (၅-၁၀-၂၀၁၅) ခွင့်ပြုချက်အရ ITC ကတ်များ သက်တမ်း တိုး လျှောက်ထားလာပါက မူလသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ သက်တမ်းတိုး လျှောက် ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်းသို့ သက်တမ်းတိုးကြေး ပေးသွင်းမည့်နေ့ ကြားကာလ အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းတိုးကြေးများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းဆောင် ရွက်ခွင့်ပြုသွားရန် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။)
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ
၁၀။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဖြင့် နယ်စပ်မှ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါသည် -
( ခ ) ဘဏ်စနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေဆောင်ရွက်သည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြင့် တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း ၊ Transit Trade တို့ကို ဆောင်ရွက်ခွင့်မပြုပါ။
၁၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူသည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရပါမည် -
(က) တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ ကိုယ်တိုင် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
( ခ ) သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ မူဝါဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။
၁၂။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကို တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကို တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ် ကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀ိ/ (ကျပ် သုံးဆယ်သိန်း)နှုန်းဖြင့် (၅)ရက်စာ တစ်ကြိမ်တည်း ကျပ်သိန်း(၁၅၀)ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါမည်။
( ခ ) ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းအား (၁၄)ရက်ခွင့်ပြုပါမည်။ သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။
( ဂ ) ပို့ကုန်လိုင်စင်များကို နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် နည်းစနစ်အတိုင်း အုပ်စုလိုက်စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
( က ) သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကို တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ် ကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀ိ/ (ကျပ် သုံးဆယ်သိန်း)နှုန်းဖြင့် (၅)ရက်စာ တစ်ကြိမ်တည်း ကျပ်သိန်း(၁၅၀)ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါမည်။
(ခ) သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းအား (၁၄)ရက်ခွင့်ပြုပါမည်။ သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။
( ဂ ) သွင်းကုန်လိုင်စင်များကို နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိလိုင်စင်ထုတ်ပေး သည့်နည်းစနစ်အတိုင်း အုပ်စုလိုက်စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာန၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိမှသာ သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေး၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့တင်သွင်းမှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အခများကို ပေးဆောင်ရပါမည်။
၁၄။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ဒဏ်ကြေးများအား နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းပါမည်။
၁၅။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်လွှာနမူနာပုံစံအား နောက်ဆက်တွဲ (က) ပါပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နမူနာပုံစံအား နောက်ဆက်တွဲ (ခ) ပါပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၆။ ITC ကတ်ဖြင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆောင်ရွက်သူများအား နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်း (ကျပ်ငွေကြေး) ဖြင့် ခွင့်ပြုသည့်ပစ္စည်းများအား တင်ပို့၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုပါသည်။ ယခင်ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သော ပို့ကုန် (၁၆၀) မျိုးနှင့် သွင်းကုန် (၂၄၃) မျိုးအပြင် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော HS လိုင်းအလိုက် ထုတ်ပြန်ထားရှိသည့် ပို့ကုန် (၉၈၃) လိုင်းနှင့် သွင်းကုန် (၂၀၇၉) လိုင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား တစ်ရက်လျှင် (၁) စီးနှုန်းဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် (၅) စီးနှုန်းအပြင် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၄) မျိုး၊ သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၄၆) မျိုးအား ထပ်မံတိုးမြှင့် ခွင့်ပြုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ( Individual Trading Card) ဆောင်ရွက် ခွင့်ရှိသော ဒေသခံများ
(က) တမူးစခန်း - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
( ခ )မူဆယ်စခန်း - မူဆယ်၊ လားရှိုး၊ ကျောက်မဲခရိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
( ဂ ) မြဝတီစခန်း - မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
(ဃ) တာချီလိတ်စခန်း - တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းဆတ်၊ တောင်ကြီး၊ လင်းခေး၊ လွိုင်လင်ခရိုင်များ အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( င ) လွယ်ဂျယ်စခန်း - ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( စ ) စစ်တွေစခန်း - စစ်တွေခရိုင်၊မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
(ဆ) မောင်တောစခန်း - ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
( ဇ ) ချင်းရွှေဟော်စခန်း - ကွမ်းလုံခရိုင်အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
( ဈ) ကန်ပိုက်တီးစခန်း - မြစ်ကြီးနားခရိုင်နှင့် မိုးညှင်း အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
( ည) မြိတ်စခန်း - မြိတ်နှင့်ထားဝယ်ခရိုင် အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
( ဋ ) ကော့သောင်းစခန်း - ကော့သောင်းခရိုင် အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
( ဌ ) ရိဒ်စခန်း - ရိဒ်၊ တီးတိန်၊ ကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( ဍ ) ထန်တလန်စခန်း - ထန်တလန်၊ ဟားခါး၊ ဖလမ်းဒေသအတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
( ဎ ) မောတောင်စခန်း - မြိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
(ဏ) ထီးခီးစခန်း - ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
(တ) ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ၊
(မန္တလေး) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နေထိုင်သူများနှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ နေထိုင်သူပြည်သူများ။
(ထ) ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး - ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်းရှိ (ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းခတ်၊မိုင်းယန်း၊ (ကျိုင်းတုံ မိုင်းပျဉ်း) ကျိုင်းတုံ(ရုံးခွဲ) မြို့နယ်များနှင့် တာချီလိတ်
ခရိုင်အတွင်းရှိ (မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိ (တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ ကလော၊
ပင်းတယ၊ ရွာငံ၊ ရပ်စောက်၊ ပင်လောင်း၊ ဖယ်ခုံ)၊ လင်းခေးခရိုင် အတွင်းရှိ (လင်းခေး၊ မိုးနဲ၊ မိုင်းပန်၊ မောက်မယ်)
လွိုင်လင် ခရိုင် အတွင်းရှိ (လွိုင်လင်၊ လဲချား၊ နမ့်စန်၊ ကွန်ဟိန်း၊ ကျေးသီး၊ မိုင်းကိုင်၊ မိုင်းရှူး)) မြို့နယ်များရှိ
( ဒ ) ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး - ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း
(မြစ်ကြီးနား) နေထိုင်သော ဒေသခံပြည်သူများ။
( ဓ ) ကျိုင်းလပ်စခန်း - တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းဆတ်၊ တောင်ကြီး၊ လင်းခေး၊ လွိုင်လင်ခရိုင်များအတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( န ) မယ်စဲ့စခန်း - ကယားပြည်နယ်အတွင်း ဒေသနေပြည်သူများ။
၁။ ကျွန်တော်/ ကျွန်မ ဦး/ဒေါ် ………………………..၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် …………………………. သည် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုပါ၍ တစ်ဦး ချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါရန် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများ ပူးတွဲ တင်ပြလျှောက်ထားအပ်ပါသည် -
(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား (မူရင်း/မိတ္တူ)။
( ဂ ) အိမ်ထောင်စုဇယား ပုံစံ (၆၆) (မူရင်း/မိတ္တူ)။
( င ) သက်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်ကုန်သည်အသင်းဝင်ကဒ်ပြား (မူရင်း/မိတ္တူ)။
( စ ) ပတ်စပို့အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ
နောက်ဆက်တွဲ ( ခ )
မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ITC-စခန်း Code - (00001)
….…………… မှ …………………. ထိ ……………………………. ……………………………………..
….…………… မှ …………………. ထိ ……………………………. …………………………………………
ဤ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည် -
Read more about တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
Read more about ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်